अफगानिस्तान : आईएसआई-के भनेको के हो ? किन तालिबानको आक्रमण बढ्यो ?Nepalpana - Nepal's Digital Online
काबुल । अगस्त २६ मा भएको काबुल विमानस्थल विस्फोटपछि एकाएक आईएसआईएस खोरासन चर्चामा आयो । इस्लामिक स्टेट खोरासन (आईएसआईएस के) अफगानिस्तानमा रहेको आईएसआईएस अन्तर्गतको एक विद्रोही संगठन हो ।
अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले वर्षौंदेखि सैन्य प्रयासको बाबजूद अमेरिका र अन्य नाटो साझेदारहरुद्वारा अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइसकेका छन् । तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामामा फर्किएपछि भएको उक्त विस्फोटमा करिब एक सय जनाको मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने अगस्ट ३१ को समयसीमा कायम राखी आईएसआईएसको धम्कीलाई उद्धृत गरेका छन् । उनले आक्रमणको लागि अफशूट समूहलाई दोषी ठहराए, जसमा एक आत्मघाती बमवर्षक पनि थियो, जो अमेरिकी सेवा सदस्यहरु द्वारा नियन्त्रित एयरपोर्ट गेटहरु बाहिर अफगानहरुको भीडमा फसेका थिए ।
इस्लामिक स्टेट खोरासन के हो ?
सन् २०१५ मा स्थापना भएको आईएसआईएस के इस्लामिक स्टेटको शाखा हो । जो ऐतिहासिक ईरान, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको भागहरुलाई कभर गर्दछ ।
यो सुरुमा पाकिस्तानबाट आतंकवादी तालिबान सदस्यहरुसँग मिलेर बनेको थियो र मुख्य रूपबाट अफगानिस्तानको उत्तर र पूर्वमा काबुलको नजिकै सञ्चालित छ ।
समूहले उज्बेकिस्तानको इस्लामिक आन्दोलनबाट कार्यकर्तालाई आकर्षित गरेको छ ।
ईराकको मात्र सुन्नी मुस्लिम बहुल प्रान्त बाट लडाकुहरु र तुर्केस्तान इस्लामिक पार्टीको सदस्यहरु चीनको उत्तर पूर्वबाट उइगुरहरु यस समूहमा सामिल छन् । थुप्रै इस्लामिक हिंसात्मक र चरम विचारधारालाई परास्त गर्दै इस्लामिक विश्वलाई एकताबद्ध गर्ने एक खलीफाको प्रतिज्ञा भए पनि तालिबानको भने कहिल्यै समर्थन गरेको छैन ।
अफगानिस्तानमा तालिबानी समूहले सत्ता कब्जा गरेपछि उक्त समूहविरुद्ध यस समूहले विद्रोह सुरु गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को पछिल्लो रिपोर्टले सन् २०१५ मा एक हजार देखि २२०० लडाकू रहेकामा सन् २०१६ मा पाँच हजारदेखि ६००० सम्म लडाकू पुगेका थिए । पछिल्लो समय तालिबान समूह सत्तामा आएसँगै यस समूहका लडाकूको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ ।
तालिबान र आईएसआई के शत्रु समूहहरु हुन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेको पश्चिमा समर्थित सत्तालाई परास्त गर्न लडे पनि उनीहरुको उद्देश्य फरक रहेको जनाइएको छ । तालिबानी समूहले राखेको प्रस्तावहरु आईएसआईएस केले खारेज गरेको छ ।
तालिबानको कब्जापछि अफगानिस्तानमा प्रतिबन्धित आतंकवादी समूह हक्कानी नेटवर्क सक्रिय
भाद्र १९, २०७८ शनिवार ०९:३२:३७ बजे : प्रकाशित